रविबारे २ खुलासा ! नृत्य प्रशिक्षकदेखि ‘कर्णाली आइडल’ सम्मको यात्रा – Everest Dainik – News from Nepal
रविबारे २ खुलासा ! नृत्य प्रशिक्षकदेखि ‘कर्णाली आइडल’ सम्मको यात्रा
काठमाडौं, मंसिर २३ । जारी नेपाल आइडल–२ को ‘टप फोर’ मा पुग्न सफल रवि ओडको बारेमा जान्ने इच्छा धेरै समथर्क एवं पाठकलाई हुनसक्छ । यसकारण आज धेरैलाई जानकारी नभएका केही कुराहरु तपाइँमाझ जानकारी गराउनेछौं । रवि नृत्य गर्न पनि त्यत्तिकै माहिर छन् ।
यो कुरा सायद धेरैलाई थाह होला । तर, उनी अरुलाई पनि नृत्य सिकाउँथे भन्ने कुरा चाहिँ कमैलाई थाह हुनुपर्छ । रविले सुर्खेतको कोपिला भ्याली विद्यालयमा डान्स शिक्षकमा रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् । साथै, अर्को कुरा– उनी नेपाल आइडलमा आउनुअघि ‘कर्णाली आइडल’ मा पनि सहभागि भएका थिए ।
यसबारेको भिडियो पनि प्राप्त भएको छ । उनले त्यहाँ ‘अब जाउँला रेलैमा’ बोलको गीत गाएका थिए । तर, उनको कर्णाली आइडलको यात्रा कहाँसम्म पुग्यो भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन । रविले कर्णाली प्रदेशमा पनि केही समय विताएका छन् । उनले त्यहाँको व्यक्तिहरुसँगको सम्बन्ध पनि बढाएका छन् ।
अझ भनौं रविको सम्बन्ध सुदूरपश्चिमसँग मात्र नजिक छैन कर्णालीसँग पनि उत्तिकै नजिक छ । हुनत रवि एक नेपाली नागरिक हो । नेपालको हरेक भूगोलसँग समबन्ध छ । तथापि उनको क्रियाकलापको कुरा गर्दा खेरी कर्णालीको प्रशंग जोडिन पुगेको हो ।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रविका हजारौं समर्थक छन् । उनीहरुले पनि रविलाई अत्यधिक साथ लिइरहेका छन् । समर्थकको साथले नै रवि यो स्थानसम्म पुग्न सफल भएका हुन् ।
Posted by Niru Ghatane on Monday, 26 November 2018